समाचार - सामानहरू समात्ने, मूल्य बढ्छ, र अर्डरहरू अर्को बर्षको पहिलो आधा लागि निर्धारित! -इन्च वेफर फाउन्ड्री क्षमता भरिएको छ
सामानहरू समात्दै, मूल्य बढ्छ, र अर्डरहरू अर्को वर्षको पहिलो आधाको लागि निर्धारित छन्! -इन्च वेफर फाउन्ड्री क्षमता पूर्ण छ
छवि सेन्सर सीआईएस, पावर मैनेजमेन्ट चिप पीएमआईसी, फिंगरप्रिन्ट पहिचान चिप, ब्लुटुथ चिप, विशेष मेमोरी चिप, इत्यादिको लागि आवेदन मागको द्रुत बृद्धिका कारण,-इन्च वेफरहरूको लागि आदेश तातो छ।
सेक्युरिटी टाइम्सका अनुसार G जी मोबाइल फोनको क्रमिक सुरुवातको साथसाथै, चिप चिप पार्ट्सको फाउन्ड्रीको माग बढ्दै गएको छ। TSMC, Samsung, GF, UMC, र SMIC जस्ता फाउन्ड्री कम्पनीहरूसँग पूर्ण क्षमता छ र विक्रेताको बजार भएको छ।
सामसुले manual इन्च उत्पादन लाइनका लागि म्यानुअल यातायातदेखि मेसिन यातायात सम्म स्वचालित लगानीका बारे विचार गरिरहेको छ, र १०० अरब अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ।
धितो टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार फाउन्ड्री उत्पादन क्षमताको छोटो आपूर्तिको कारण केही आईसी डिजाइन निर्माताहरूले खुलासा गरेका छन कि उनीहरूले निकट भविष्यमा नयाँ फिल्मको मूल्य बढाए र ग्राहकलाई यस चौथो क्वाटरमा फाउन्ड्रीको मूल्य बढाउन सूचित गरे। वर्ष र अर्को वर्ष।
संस्थापक धितोको गणनाको अनुसार सेप्टेम्बरदेखि, इन्च वेफर फाउन्ड्री क्षमता कडा रहेको छ र फाउन्ड्री डेलिभरी अवधि लगातार months महिना वा आधा बर्ष भन्दा बढीमा विस्तार गरिएको छ। यो अपेक्षित छ कि चौथो क्वाटरमा नयाँ अर्डरहरूको फाउन्ड्री मूल्य बढाइनेछ। १०% ले वृद्धि हुनेछ।
उद्योग स्रोतका अनुसार सेन्जेन डे रुइपुले सेप्टेम्बर १ on मा उत्पाद मूल्य बढाउने सूचना जारी गर्न नेतृत्व लिएको छ र यो घोषणा गर्दै कि कम्पनीले अक्टुबर १, २०२० बाट त्यसको आधारमा आफ्नो उत्पादन मूल्य समायोजित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको 20२०5 मूल मूल्यमा आधारित हुनेछ । ०.०२ युआनले बढाउनुहोस्।
अर्को एमओएस ट्यूब निर्माता शेन्जेन जिनियु सेमीकन्डक्टरले पनि मूल्य बढाउनका लागि ग्राहकलाई सम्पर्क पत्र पठाएको छ। अक्टूबर १, २०२० देखि, एमओएस ट्यूब र आईसी श्रृंखला उत्पादनहरूको मूल्य अनुरूप २०% -30०% समायोजित हुनेछ।
केही विश्लेषकहरूले भने कि वर्तमान-इन्चको उत्पादन क्षमताको लागि डिमांड साइड-ड्राइभिंग कारक एनालग चिप्स र पावर उपकरणहरूको मागको निरन्तर वृद्धि हो, जबकि आपूर्तिको वृद्धि दर मागको वृद्धि दर भन्दा पछाडि छ, जसले प्रमुख उत्पादकहरूलाई बनाउँछ। सक्रिय ढ found्गले फाउन्ड्री डिप्लोय गर्नुहोस्।
औद्योगिक सुरक्षाले भने कि चिप्सको हालको अभाव मुख्यतया आपूर्ति श्रृंखला अवरोधका कारण हुन्छ। केही मोबाइल फोन ब्रान्डले आपूर्ति चेन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विगत तीन महिनामा चिप खरीद बढाएको छ। नतिजाको रूपमा, हालको उद्योग सूची धेरै तल्लो तहमा छ।
यसै समयमा, शाओमी, ओपीपीओ र अन्य ब्रान्डहरू अर्को बर्षमा मोबाइल फोन साझेदारीमा ठूला परिवर्तनहरू हेर्दै छन्। उनीहरू अर्को बर्षको शेयर बृद्धिको बारेमा बढी आशावादी छन्। तिनीहरूले स्टक गर्ने लक्ष्य पनि बढाउँछन्। त्यहाँ अचाक्ली स्थिति छ भन्ने कुरालाई इन्कार गरिएको छैन। त्यसकारण, औद्योगिक धितोहरु को उम्मीद छ कि अभाव अर्को वर्ष को पहिलो आधा सम्म जारी रहनेछ। ।